Naanị n'ihi na ị nwere ike ... | Martech Zone
Monday, March 31, 2008 Na Tọzdee, Septemba 4, 2012 Douglas Karr
Afọ ole na ole gara aga mgbe Bluetooth kụrụ ahịa, e nwere mkpọtụ na ụlọ ọrụ mgbasa ozi. Kedu otu ọ ga-adị ma ọ bụrụ na ị nwere ịrị elu na ekwentị gị mgbe ị nọ nso nke ngwaahịa, ọrụ ma ọ bụ azụmaahịa ahụ? Apụrụ m ịhụ ndị mgbasa ozi na-asọ asọ ugbu a!
Nke a bụ ihe oyiyi m hụrụ na Pọtụfoliyo saịtị nke ahụ na-akọwa usoro ahụ.
Ka mmadụ na-abịa n’otu ebe a na-akpọsa mgbasa ozi, ekwentị ejiri Bluetooth rụọ ọrụ na-egosipụta ozi maka mgbasa ozi.
Ka a sịkwa ihe mere ndị mgbasa ozi ji asọ mmiri - ị nwere P nke anọ nke ịre ahịa niile n'otu: ngwaahịa, ọnụahịa, nkwalite na ebe! IMHO, ị na-efu 'P' nke kachasị mkpa ma ọ bụrụ na ị chọrọ!
Ọnụ ọgụgụ mgbasa ozi nke ọtụtụ ndị America na-ahụ kwa ụbọchị agbawawo ruo na nnukwu 3,000 ozi kwa ụbọchị. Ọtụtụ, n'eziokwu, na anyị atụkwasịla verbiage na akwụkwọ ọkọwa okwu anyị maka ozi achọghị - bido na email ma ugbu a a nabatara ya dịka mgbasa ozi na-emetụta - SPAM.
Ndị America na-arịa ọrịa na ike gwụrụ. Anyị manyere gọọmentị anyị ime ihe banyere ya, mepụta ya Kpọọ ndekọ na CAN-SPAM Mee ihe gabiga ozi ịntanetị achọghị. Ihe omume CAN-SPAM, dị egwu, emeela naanị adịgboroja adịgboroja n’aka ndị spammers ma sie ike karị na emailers.
Kwụsị iziga m! Kwụsị ịkpọ m na nri abalị! Kwụsị! Ọ bụrụ na m chọrọ ngwaahịa gị ma ọ bụ ọrụ gị, m ga-ahụ gị! Aga m ele gị anya n'ịntanetị. Aga m ajụ ndị enyi m maka aro. Aga m agụ blọgụ gbasara gị.
Ahịa Bluetooth abanyeworị. Michael Katz edeela ahịrịokwu a, Mgbasa ozi, na-akọwa omume nke asọmpi gị na-akụ gị ozi asọmpi mgbe ị nọ nso asọmpi ahụ. Chei! Cheedị ịzụ ụgbọ ala ma nweta ozi site na Bluetooth site na ndị na-ere ahịa na-eso ụzọ na-agwa gị ka ị bịa ozugbo maka $ 500 ego!
Mgbasa ozi dị ọtụtụ dị ka nje (n'ụzọ ndị ọzọ karịa otu!). Ka ndị ahịa na-ekpughere nje na-ebuwanye ibu, ikike ha nwere iguzogide nje ahụ na-abawanye ruo mgbe ha mechara chefuo ya. Ka mgbasa ozi na-akawanye njọ, ndị na-azụ ahịa na-eguzogide ha. Nọgide na-agbaso usoro mgbasa ozi ndị ọzọ na-akpali akpali na ị ga-emerụ onwe gị ahụ - yana ụlọ ọrụ ahụ.
Gịnị kpatara ndị mmadụ ji eme ya mgbe ahụ? N'ihi na ọ na-arụ ọrụ! Maka mmadụ 1,000 ị nwere ike izipu ozi maka $ 500, 5 nwere ike ịzaghachi. ROI na nke ahụ maka ịkwanye ozi Bluetooth dị na puku kwuru puku. Na ndị iwe ị na-ewe iwe agaghị azụta n'aka gị, agbanyeghị onye na-eche?
Nsogbu bụ na nke a bụ ahịa dị mkpirikpi na-aga mgbe nsonaazụ ozugbo na enweghị usoro ogologo oge. Mmebi nke ị na-eme siri ike ịlele n'ihi na ọ na-emetụta nsonaazụ dị ala n'okporo ụzọ ahụ. Site na mgbe ahụ, VP gị nke Ahịa ma ọ bụ Mgbasa Ozi nwere ike ịgafe ma na-ackingụ azụmaahịa ha ọzọ n'okpuru.
Isi okwu bụ na ọ bụrụ na ị nyeghị 'P' nke ise - Ikike - ụfọdụ ntị, ị ga-enwe ike imebi ahịa gị ogologo oge. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, naanị n'ihi na ịnwere ike iji teknụzụ push dị ka nke a, ọ pụtaghị na ị kwesịrị.
Aga m apụ apụ ma kwuo na nke a bụ ụdị mgbasa ozi sitere na teknụzụ, ma ọ bụghị nke ọzọ. Ndị guzobere Bluetooth adịghị anọdụ ala otu ụbọchị wee sị, “Nwoke, ọ dị m ka ya bụrụ na anyị nwere ụzọ anyị ga-esi mee ka mgbasa ozi gaa na ekwentị ka mmadụ na-agafe!”.
Tags: Mgbasa OziBluetoothahia BluetoothNso nso nke Bluetoothahia ahia bluetoothidi nso ahia
Finding Visio… aka… Ndị mmadụ na-eche ihe kpatara m ji nọrọ na Mac
Ọ bụ naanị otu ihe atụ nke ka ọtụtụ ndị si etinye oge dị ukwuu na-eche banyere otu ha nwere ike isi nweta uru karịa maka achịcha dị adị ma bụrụ onye amụrụ banyere onye ọ bụla ọzọ, kama otu ha nwere ike isi tinye uru dabere na ihe ndị ọzọ chọrọ n'ezie.
Ndị mmadụ na-eme nke a oge niile tupu ụbọchị ejikọtara na Internetntanetị ọ fọrọ nke nta ka ọ pụta ìhè. Ugbu a n'ihi na ọ dị ntakịrị ntakịrị ịmịnye ọchịchọ mmadụ iwepu ọnụọgụ ọnụọgụ mmadụ ole anyị bara uru ebe, belụsọ ihe gbanwere. anyị niile ga-anọ n’okpuru nrụgide oge niile wee wulie elu nke na ihe ga-akwatu n’ụzọ anyị na-enweghị ike iche n’echiche.
OTOH, na nke a bụ olileanya m, na ndị mmadụ na-amalite ịghọta na ọ bụghị naanị na ịgbanye uru na-enye ha ezigbo karma, ọ ga-emekwa ka ha ka mma nloghachi karịa ogologo oge. Ndi mme owo ẹyenyene un̄wana oro? Naanị oge ga-agwa…
BTW, agbara m nzukọ na Leverage nke Mobile Web at Atlanta Ndị ọchụnta ego Web na otutu mmadu kwenyere nke ndị bịaranụ banyere push mgbasa bụ karịrị “Emela gị -eche banyere ya, ma ọ bụ na m ga-ejedebe ramming m mobile ngwaọrụ anya, nnọọ n'ebe ụfọdụ ị ga-n'ezie ọ kama ịbụ.”Ma ọ bụ ihe yiri ya. 😉
Tactdị ahịa ahịa nke na-eme ka ị mata na ị ga-ewepụ akụkụ dị oke mkpa nke ahịa gị iche ga-eme ka ị kwụsị ọrụ.
Dịka onye na-ezigara gị ozi, a na-ajụkarị m ma ọ bụrụ na ihe dị ka email, na ozi ederede ugbu a, emerụọla akwụkwọ ozi ozugbo. Ọ bụghị Ọ bụrụ na ihe ọ bụla, ọ na-eme ka ọ bụrụ ewu ewu karị, n'ihi na ọtụtụ mmadụ ka na-achọ ịnweta ozi ngwaahịa na ụgwọ ọhụụ site na ozi, karịa email.
Agbanyeghị, anyị adịghị ahụkebe na ụlọ ọrụ nzi ozi, n'ihi na anyị na-agba ndị mmadụ ume ka ha belata ọnụọgụ ozi izipu ozi ha na-ezipụ. Achọghị m ka ndị mmadụ na-ezipụ ọtụtụ ihe nye ọtụtụ ndị anaghị achọ inweta ya; Achọrọ m ka ha zigara ndị nwere ike ịzụta, obere mmasị karịa ha, na enweghị ike itinye envelopu ha na-enweghị ele ya anya.
M dere banyere adịghị akpọ anatara na blog nke m
Ọ na-eju m anya na ọ dị ka ọhụhụ ụzọ nke isiokwu a na ọtụtụ nkọwa. Mba, ndị ọma nọ na Bluetooth anaghị anọdụ ala na-anwa ichepụta ụzọ ndị ọzọ nke mgbasa ozi mgbe ha mepụtara ngwaahịa ha. Mana ọzọ ejiri m n'aka na ndị na-echepụta televishọn na redio anaghị anwa ịme nke ahụ. Ma n'ụzọ ụfọdụ, ọtụtụ iri afọ ka e mesịrị, ọ bụ ụzọ a nabatara nke ọma maka ire ahịa.
Ọ bụrụ n'eziokwu na-eche maka ya, ahịa Bluetooth bụ ikike karịa dabere na TV, redio, na mbipụta. Don'tnweghị nhọrọ kachasị oge mgbe ị na-elele mgbasa ozi sitere na nnukwu mgbasa ozi, mana ngwaọrụ Bluetooth ọ bụla dị n'ebe ahụ ga-akpali gị maka nnabata tupu ịnata ọdịnaya ọ bụla (dị ka ihe atụ gị gosipụtara n'ụzọ doro anya). Gịnịkwanụ ma ọ bụrụ na ịchọghị ka a kpalie gị ma ọlị? Akwa! Nanị gbanyụọ Bluetooth na ngwaọrụ gị, ma ọ bụ setịpụrụ ya? mode.
Ugbu a, anyị niile maara na nnukwu mgbasa ozi bụ ụlọ ọrụ na-arịa ọrịa na / ma ọ bụ na-anwụ anwụ, ekwenyere m na nyocha gị nke mgbasa ozi dị ka nje. Ndị mmadụ na-arịa ọrịa nke ịhụ ozi nzuzu sitere na ụlọ ọrụ ha enweghị mmasị na ya? na ugbu a na ekwentị m? Ihe jọgburu onwe ya! Ma olee ebe anyị ga-anọ ma ọ bụrụ na anyị ekwe ka echiche ndị ochie gbuo ndị ọhụrụ? O doro anya na anyị achọghị mgbasa ozi ọdịnala na ekwentị anyị. Nke ahụ ga - eme ọhụụ ọhụrụ a ihe o mere ndị ochie. Mana ọ bụrụ na m zitere ụdaolu, mgbasa ozi, ma ọ bụ nchekwa ihuenyo dị jụụ? pssh sure, kporom m onu. Nke a bụ akụkụ kachasị ukwuu gbasara teknụzụ ọhụrụ ndị a: nhọrọ maka ọdịnaya enweghị oke. Dị ka Mike Schinkel si kwuo, ụlọ ọrụ ndị a kwesịrị ka a kụziere ha otu esi agbanye uru. Ọ bụrụ na ndị na-ere ahịa na-eburu nke ahụ n’uche ma kesaa ọdịnaya na mmekọrịta, ọ bụghị naanị 10% kwụsịrị coupon maka Starbucks, mgbe ahụ ha na-arụ ọrụ ha. Ọ bụrụ na edebe ihe dị mkpa ma na-atọ ụtọ, echere m na ọ ga - enyere ụlọ ọrụ ha na ụlọ ọrụ ha aka, ọ gaghị emerụ ya ahụ.
Aug 21, 2008 na 10: 39 AM
Ndewo, ọ dị ugbu a ka m na-eji LightBluetooth Light na I enweela ezigbo echiche banyere ngwanrọ ahụ. M na-eji demo vesion ma na-atụle ịzụta ikikere $ 99.
Ha nyekwara m 25% ego coupon maka ndenye ọpụpụ Google? Blue4less?
Maka ama ndị ọzọ, saịtị ha dị http://www.areabluetooth.com/en/
Jenụwarị 18, 2009 na 12:56 PM
M mepụtara a post banyere 6 'P si na bluetooth proximity marketing part n'ike mmụọ nsọ site a post. M na-eche permssion fọrọ nke nta ka a na-agụ n'echiche na ị chọrọ igbu ihe ọ bụla mkpọsa n'ụzọ ziri ezi na dị na kasị mma omume.
Site na ahụmịhe ahụrụ m 'P' kachasị mkpa na mkpọsa nnọchiteanya na-ekwe nkwa. Enyerela m ụfọdụ ọgụgụ iji gosipụta nke a.